Heano maitiro ekuita mateki akakwana - AFRIKHEPRI
Tarisa Bessie (2015)
Makasimba mabheti ane mavhesi akanaka, vose vakadzi (uye varume!) Dream. Kana pane chimiro chekubereka kana kuva, maziso akanaka, isu tinogona tose tive nekunaka kwepamusoro nekuwedzera, kana nguva ... uye mari.
Steatopygia: the genetics yemakumbo "kuAfrica".
Zvinhu zvina zvinokonzera mazamu zvinoitika apo maitiro eAfrica neAfro-descendant vakadzi anotaurwa.
Iko pfupa rakagadzirwa: sarudzo ye lumbar spine uye sacrum inoumba mutsindo kwete mutsara wakarurama. Kana iwe uine mukana wekuva necheka rakanaka, iwe pachako uchange uine zvigaro zvakanaka.
Izvo musimba chimiro (yakakura, yakasviba neyediki gluteus): fiber fiber yaizove yakawanda pakati pevaAfrica, iyo inogona kubvumira hutundu hwakawanda hukuru.
Chimiro cheadipose tissue: mamwe madzinza eAfrica (Bushmen, Hottentots, Pygmies, Khoians, Hadza ...) ane mazita anonzi steatopygia. Iko kuunganidza mafuta mumakona nemahudyu ndiyo simba rekuchengetedza kuti rivepo kuti vararame panguva dzenzara. Izvi zvinogonawo kuva tsika uye mamwe madzinza (muNiger kunyanya) kuita hangandi(kushandisa simba) vakadzi kuti vave nehutano hwevanhu.
Chimiro chedermisGanda rima rine denser dermal tissue kupfuura ganda reCaucasian. Collagen uye elastin fibroblasts dzakawanda. Izvi zvinoguma nekusimbiswa kwakakwirira, ganda rinotonhora.
Mhinduro yezvigadzirwa zvemiti.
MuEurope, "zvipfeko zvakakosha" zvinokonzera kupedza cellulite (zvishoma nezvishoma) uye kunatsiridza kunaka kweganda (firming). Migumisiro yezvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinogona kukurudzirwa nemaitiro ekugadzira (massage) kana magetsi (endermology, electrostimulation).
MuAfrica (asiwo muBrazil kana United States), mamiriro acho akasiyana. Hatidi kunyungudutsa mapako ake. Pane zvakasiyana, tinoda kuzviona dzichidzikama! Kuva nemakumbo akawandisa kunotendeukira kune kukanganisa kwevamwe. Bora-Bora makiramu, Botcho cream ("mahombekombe" muAbidjan slang), Yodi mapiritsi (South Africa), cod chiropa mafuta suppositories anowanikwa nechikafu chakazara mu lipids, Brazilian herbs (maca), yokuronga mapiritsi ... idzi zvigadzirwa opaque sezvamunoita anofanira kuwedzera mafuta vhoriyamu.
MuAfrica, dzimwe tsika - iyo kubudirira haisi kuratidzirwa nguva dzose - inowanzova yakaoma asi ine ngozi kune utano.
Vamwe mapiritsi (kuberekwa mhando) kuti achazvimba kuti magaro inotokonya pituitary shwanu kusunungura inonzi estrogen kuti zvigoneke kuti muviri wako kuti achengetere mafuta ari magaro uye hudyu (uye / kana kumwewo!) Kuti dzikure. Zvinetso zvinogona kuoneka: cysts muzvipfuva, kushungurudza kwekuenda kumwedzi, kushungurudzika kwemanzwiro ...
To nokukurumidza kudza pamagaro avo, mazamu avo kana hudyu, vamwe vanoenda baya jekiseni mishonga kubva Deca Durabolin, imwe anabolic steroid chigadzirwa yakakurumbira vane muviri kuti inosimudzira kukura gluteal tsandanyama, pamwe nemvura chengetedzo mumatumbu. Asi zvinokanganisa zvakawanda: hypertension, headaches, bleeding nose, acne ...
Other chidobi zvachose penga uye isingambokwanisi yesayenzi hwaro: Maggi bouillon kuutio akaiswa anally yekuita kuunganidza mafuta ari magaro. Yakakwirira munyu zviri kuutio zvikuru kungatikanganisa kune mucous membranes uye chikonzero zvirwere pamwe nemamwe matambudziko anogona kukanganisa vakadzi upenyu.
Mitambo: kuwirirana kunaka nekugara zvakanaka.
Iyo inoporesa uye inodhura chisarudzo ichiri kutopinda mumutambo. Iyo mhuka ine mitsipa mitatu: yakakura, yakasvibirira uye duku ye gluteus. Izvo zvinokonzera maronda ndezvepamusoro pemuviri wemunhu. Vose vanogona kutarirwa nenzira dzakasiyana kuburikidza nemitambo uye nokukurumidza kuwana yakawanda. Pa 5 20 maminitsi pavhiki, kushandura cardio uye kuvaka muviri, iwe unofanira kukurumidza kuona zviuno zvako zvakagadzirisa. Heano mamwe emabasa anobudirira zvikuru.
Muchigaro chakamira: mberi slits, squats
4 paws: kuruka uye kuwedzera kumushure, imbwa duku
Kunyengera kumusana: bhiriji
Gare gare rakarara: yakatambanudzwa gumbo kumusoro
Kusimudza-bvisa uye kusvibiswa: kuvhiyiwa kwezvipfeko kumakumbo.
Sezvakataurwa munyaya yedu pamusoro mhando huru 2016, Africa inyika yekusarudzira kwekudhura kwemaesthetic tourism. Makiriniki akawanda ekutenderera anobvumira kusanganisira kushanda kweesesthetic uye resort. Kubva kuCNUMX years, kuwedzera kukuru kwemashoko ekushanda ndiko kuwedzera kwehuwandu hwemakumbo (+ 2% pagore muU.SA, + ​​86% muSouth Africa!). Rakafuridzirwa nyeredzi dzakaita Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Beyonce, Nicki Minaj, zviuru zvevakadzi vanoshandisa ichi. More dzokumadokero chete mutengi asi, yakawandisa, vakadzi vechitema kubva yokumusoro kirasi pakati. An tsika zvinodhura (zviuru zvakawanda euros) uye, kufanana chero chiito wokuvhiya, izvo zvingakonzera post-kushanda matambudziko (marwadzo, kurambwa, kuporesa ...).
The lipostructure yezvigaro inowanikwa muzvikamu zviviri Aspirate (somuenzaniso mumakumbo) zvino inoshandura mafuta ako mumakona kuti agadzire ivhu uye maitiro. Mishonga inogona kudzokororwa.
Kuiswa kwesilicone implants inobvumira kuwedzera kunoshamisa kwehuwandu uye maitiro emagaro.
The sculpting lingerie.
Uyai, kune avo vanoda kubiridzira zvishomanana ... zvisingasviki uye zvisingagoneki uye pasina kushanda uye pasina kushanda, mifananidzo yekugadzira ndiyo INHU. Tinosarudza zvipfeko zvemashure kana chepyhose ne-integrated prosthesis iyo inokwanisa kuvhara kumusoro kwezvigaro. Ikozvino shanduro yezuva (faux-cul) yakakurumbira zvikuru muFrance muzana remakore rechigumi nemapfumbamwe.
Ichi chinyorwa uye nezvimwe zvakawanda pamusoro www.panafricanbeauty.com
Ndiani ainzi Abraham Petrovich Hanibal?